एक्स्पोले निर्माण क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता एक्स्पोले निर्माण क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ
सृजल भट्टराई, प्रबन्ध निर्देशक, मिडिया स्पेस सोलुशन्स
नेपालको मिडिया स्पेस सोलुशन्सले भारतीय कम्पनी फ्युचर ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्ट्ससँगको सहकार्यमा विगत ५ वर्षदेखि बिल्डकन एक्स्पो गर्दै आएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुने यसपटकको एक्स्पोमा विश्वभरका ३ सयभन्दा बढी कम्पनी सहभागी हुँदै छन् । एक्स्पोमार्फत नेपाली उत्पादन विदेश निर्यातको वातावरण सृजना गर्ने तथा विदेशी प्रविधि नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य आयोजको छ । प्रस्तुत छ, एक्स्पोको आयोजक मिडिया स्पेस सोलुशन्सका प्रबन्ध निर्देशक सृजल भट्टराईसँग आर्थिक अभियानका निकेश खत्रीले गरेको कुराकानीको सार :
विगत ५ वर्षदेखि आयोजना भइरहेको बिल्डकन एक्स्पोको मुख्य उद्देश्य के हो ?
बिल्डकन एक्स्पो आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य नेपालको निर्माण क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउने र बजार विस्तार गर्ने हो । पहिलो एक्स्पोदेखि नै हामी त्यही उद्देश्य लिएर अघि बढेका छौं । नेपालको निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने मेशिन, उपकरण र प्रविधिका विभिन्न ब्रान्ड (कम्पनी)लाई एकै ठाउँमा ल्याएर ग्राहकको रोजाइमा पुर्‍याउने अवसर प्रदान गर्नु पनि एक्स्पोको उद्देश्य हो ।
एक्स्पोले निर्माण व्यवसायीमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
यहाँका निर्माण व्यवसायीले अहिले नेपालमै उपलब्ध मेशिन प्रयोग गरिरहेका छन् । हाल प्रयोगमा रहेको मेशिनभन्दा बढी सुविधा तथा प्रविधियुक्त मेशिन अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध छ । ती नयाँ प्रविधिका मेशिन नेपालको निर्माण क्षेत्रमा भित्र्याएका छौं । यसरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रयोगमा आएका नयाँ प्रविधिका मेशिन/उपकरण नेपालमा भित्र्याउँदा नेपाली निर्माण क्षेत्रले फड्को मार्न सक्छ । एक्स्पोमा राखिएका निर्माण उपकरण तथा सामग्रीले व्यवसायी उत्साहित छन् । यस्ता प्रविधिको प्रयोगले छिटोछरितो र गुणस्तरीय काम गर्न सकिने भएकाले एक्स्पोले निर्माण व्यवसायीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
हाल नेपालको निर्माण क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग कत्तिको भइरहेको छ ?
प्रविधिमा जे कुरा पनि एउटै हुन्छ । त्यसमा कसले कति अनुसन्धान गरेर अगाडि बढायो भन्ने कुरा हो । नयाँ प्रविधिका लागि अनुसन्धान नेपालमा भन्दा बाहिर धेरै हुने गर्छ । हामीले त्यसलाई नेपालमा स्वीकार्दै जाने हो ।
नेपालको निर्माण क्षेत्र आफ्नै प्रविधिको अनुसन्धान गर्न नसके पनि प्रविधिको प्रयोग त भइरहेको छ । यसमा अहिले पफ प्यानलको प्रयोग भइरहेको छ । स्यान्डविच होम, सूर्यकिरण फाइबर लगायत कम्पनीले निर्माण क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरेका छन् । खासगरी चितवन ‘बेस्ड’ कम्पनी, जो हाम्रो प्रदर्शनीमा पनि सहभागी छन् ।
त्यस्ता कम्पनीले निर्माण क्षेत्रका लागि एकदमै राम्रो काम गरेका छन् । त्यसैगरी उद्योगको पूर्वाधारमा पनि काम गरेका छन् । साथै अहिले चितवनमा बनेको नयाँ चितवन एक्स्पो सेन्टरमा पनि उक्त कम्पनीले प्रविधियुक्त सामग्रीको प्रयोग गरेका छन् । चितवनमा बनेको सामानको निर्यात भुटानमा पनि शुरू भएको छ ।
स्वदेशी सामान विदेशमा जानु देशका लागि फाइदाको विषय हो । यसले समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो त एउटा उदाहरण भयो । यस्तै प्रकारका धेरै उदाहरण बनाएर हामीले काम गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय व्यवसायीलाई निर्माण सामग्रीको अभाव छ भनिएको छ । यो एक्स्पोमा कस्ता कस्ता सामग्री उपलब्ध हुन्छन् ?
निर्माण सामग्रीको अभाव बाहिर सुनिएको जस्तो अवस्थामा छैन । जस्तै– सिमेन्टकै नै उदाहरण लिऊँ, नेपाली बजारको माग धानेर निर्यातको चरणमा सिमेन्ट उद्योग पुगेका छन् । त्यसैगरी बिल्डकन एक्स्पोमा टाइटल स्पोन्सर रहेको आरती स्ट्रिपसिलले करोडौंको लगानीमा स्टिल उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसले निर्माण क्षेत्रमा फाइदा पुगेको छ ।
एक्स्पोमा सिमेन्ट, छड, कंक्रिट, सिमेन्ट, ब्लक बनाउने मेशिनका प्रविधि प्रदर्शनीमा ल्याएका छौं । त्यसकारण यहाँका व्यवसायीले अहिले आएको नयाँ प्रविधि अवलोकन गर्न र त्यसलाई यहाँ प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन् ।
नेपालको व्यापार घाटा वर्षेनि बढ्दै गएको छ । यसलाई कम गर्ने सम्बन्धमा एक्स्पोको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
व्यापार घाटा हुने मुख्य कारण बढी आयात र कम निर्यात हो । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नेपालमा भएको स्रोतसाधन राम्रोसँग सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यो बाहेक नेपालमा भएका विभिन्न खानीको उत्खनन गरेर आयात घटाउन सक्छौं । त्यसकारण प्रविधिको उच्चतम प्रयोग पनि व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि सहयोगी हुन सक्छ ।
एक्स्पोका मुख्य कस्ता विषेशता के के हुन् ?
हामीले पहिलो वर्ष एक्स्पो आयोजना गर्दा करीब ७० ओटा कम्पनी सहभागी थिए । यो नितान्त बिल्डिङ एक्स्पो भएकाले त्यसमा आधारित कम्पनी मात्र सहभागी हुन सक्छन् । यस पटकदेखि हामीले नेपाल बिल्डकन र नेपाल ऊड गरेर बिल्डकनलाई अलग्गै बनाएका छौं । भूकम्पपछि जुन हिसाबले पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ, त्यो सबै क्षेत्रलाई छानेर यसलाई छुट्टै एक्स्पोको रूपमा आयोजना गरेका हौं । एक्स्पोमा निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्रीको प्रदर्शनी हुनेछ ।
निर्माण व्यवसायमा के कस्ता जोखिम छन् ?
निर्माण क्षेत्रमा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगले जोखीम हुन्छ । तर गुणस्तरीय र प्राविधिक रूपमा बलियो सामान प्रयोग गर्दा जोखीम हुँदैन । त्यसकारण सबैलाई निर्माण सामग्री छान्ने अवसर दिनुपर्छ । कसैले घर बनाउन लाग्नुभएको छ भने एकै ठाउँमा विभिन्न कम्पनी सामग्री छनोट गर्नु सक्नुहुनेछ ।
बिल्डकन एक्स्पो ‘सबैका लागि’ भन्नु भएको छ, कसरी ?
हामीले यो एक्स्पो आम नागरिकलाई जानकारी दिने प्लेटफर्म बनाउने लक्ष्य लिएका छौं । एक्स्पोमा निर्माण क्षेत्र र घरभित्रका लागि आवश्यक सामग्री समेत पाइन्छ । त्यसकारण घरभित्र केही परिवर्तन गर्नुपरेको छ भने पनि उपयुक्त सामग्रीका लागि एक्स्पोले मद्दत पुर्‍याउँछ ।
एक्स्पोले अवलोकनकर्तालाई निर्माण क्षेत्र, निर्माण सामग्री, यसको गुणस्तर लगायत विभिन्न पक्षबारे जानकारी गराउँछ । त्यसैले पनि यो सबैको आकर्षण बन्ने अपेक्षा गरेका हौं ।
एक्स्पोमा अहिले नेपाली र विदेशी कम्पनीको सहभागिता कति हुनेछ ?
हामीले पहिलो वर्ष एक्स्पोको आयोजना गर्दा नेपाली कम्पनी र विदेशी कम्पनीको अनुपात ४०/६० मा थियो । तर अहिले नेपाली र विदेशी कम्पनीको सहभागिता अनुपात ५०/५० को अवस्थामा छ । यसमा नेपाली उत्पादनका रूपमा कंक्रिट, स्टिल, सिमेन्ट, पाइप एन्ड फिटिङ, फर्निचर लगायत कम्पनी सहभागी हुनेछन् ।
नेपाली र विदेशी कम्पनीको सहभागिता समान हुँदै गर्दा एक्स्पोमा प्रयोग हुने साम्रगीको आयात अवस्था कस्तो छ ?
नेपाली कम्पनीको सहभागिता एक्स्पोमा बढे पनि आयात घट्न सक्दैन ।
विदेशमै उत्पादित वस्तुको आयात घटे पनि त्यसका लागि प्रयोग हुने कच्चापदार्थ नेपालमा नपाइने भएकाले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण नेपालमा उद्योग बढेसँगै तयारी वस्तुको आयातमा कमी आए पनि कच्चापदार्थ भने आयातमै निर्भर छ ।
एक्स्पोमा गुणस्तरीय सामग्री कसरी छान्न सकिन्छ ?
निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीले आफ्ना उत्पादन प्रदर्शनीमा ल्याउनेछन् । एउटै छानामुनि धेरै कम्पनीको उत्पादन पाइने भएकाले त्यहाँबाट ग्राहकले गुणस्तरीय सामग्री पाउन सक्छन् । एक्स्पोमा यस्ता वस्तुको गुणस्तरबारे जानकारी पनि दिइन्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूलाई आफ्नो आवश्यकता र बजेट अनुसार उपयुक्त उत्पादन छनोटमा सहज हुन्छ ।
एक्स्पोबाट आयोजकले कस्तो अपेक्षा राखेको छ ?
आयोजकले एक्स्पोमा निर्माण क्षेत्र सम्बन्धी प्रविधि, मेशिनरी उपकरणलाई यहाँका निर्माण व्यवसायीका बीच ल्याउने काम गर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका काम धमाधम हुँदै छन् । त्यसैगरी ठूला होटल पनि बन्दै छन् । यसले स्वाभाविक रूपमा निर्माण सामग्रीको खपत पनि बढिरहेको छ ।
त्यसैले एक्स्पोमा आउने अवलोकनकर्ताले निर्माण क्षेत्रका नयाँ प्रविधि र निर्माण सामग्री स्पष्ट जानकारी लिन सक्छन् । एक्स्पोले समग्रमा नेपालको निर्माण क्षेत्रमा महŒवपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरेका छौं ।